आयोजक स्कुलसहित ८ स्कुल एपीएफ स्कुल कपको क्वाटरफाइनलमा
आजको न्युज मंगलबार, माघ २८, २०७६, १७:३७:००
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीफ स्कुलको आयोजनामा जारी छैठौँ नेपाल एपीफए स्कुल कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार ४ खेल सम्पन्न भएका छन् । मंगलबारको खेलपछि आयोजक नेपाल एपीएफ स्कुलसहित ८ स्कुल क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् ।
आज भएको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस स्कुलले राराहिल मेमोरियल स्कुललाई ५–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्‍यो । पुलिस स्कुलका तर्फबाट सन्देश तामाङले ३ गोल र ईशान राईले १ गोल गरे भने आत्मघाती १ गोल भएको थियो ।
त्यसैगरी आज भएको दोस्रो खेलमा ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसन स्कुलले जनसेवा माविलाई २–० को गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । ग्रिन भिलेजलाई विजयी गराउन दिनेश विष्ट र गोविन्द सिंहले १–१ गोल गरे ।
यसैगरी तेस्रो खेलमा ब्राइट होराइजन चिल्ड्रेन होम स्कुलले एम्ब्रोसिया इन्टरनेसनल स्कुललाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । ब्राइट होराइजनका तर्फबाट सन्देश महतराले २ र रेगन फडेराले १ गोल गरेका थिए ।
आजै भएको अन्तिम खेलमा पुष्पसदन आवासीय माध्यमिक विद्यालयले साल्भिनिया एकेडेमीलाई ६–० को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । पुष्पसदनका तर्फबाट नुर्बु तामाङले २, निगम राईले १, आयुष राईले २ गोल गरेका थिए भने १ आत्मघाती गोल भएको थियो ।
यसका साथै बुधबार ४ खेल भएसँगै लिग चरणका सम्पूर्ण खेल समाप्त हुने छन् । बुधबार ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसन र ब्राइट होराइजन, राराहिल मेमोरियल र साल्भिनिया एकेडेमी, नेपाल पुलिस स्कुल र सैनिक आवासीय महाविद्यालय तथा जनसेवा मावि र जेम्स स्कुलबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
चार वटा लिग चरणका खेल बाँकी छँदै क्वाटरफाईनल यात्रा सुनिश्चित गर्ने टिमहरु तय भइसकेका छन् । जसमा आयोजक नेपाल एपीएफ, ग्रिन भिलेज, ब्राइट होराइजन, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, नेपाल पुलिस स्कुल, ल्याब्रोटरी मा.वि., हारती शिक्षा मन्दिर र लिटल एन्जल्स स्कुल क्वाटरफाइनल पुगिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६, १७:३७:००
काेराेनाका कारण साफ च्याम्पियनसिप अर्काे वर्ष मात्रै
'म्याच फिक्सिङ' मुद्दामा पूर्वकप्तान थापासहित ६ जनालाई सर्वोच्चकाे सफाइ
ब्राजिली पूर्वफुटबलर रोनाल्डिनो पक्राउ
रंगेलीमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियाेगिता सम्पन्न, न्यु स्टार प्रथम
शनिबार काठमाडाैंमा इन्जिनियर्स सम्मेलन दौड हुने
रंगेलीमा १२औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय (सूचीसहित)
कांग्रेसले ओलीलाई साेध्याे : जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति ?
पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पर्‍याे : प्रवक्ता श्रेष्ठ
शनिबारसम्मका लागि नेकपा बैठक स्थगित
नेपालीकाे उद्धार गर्न कि काेराेना सार्न गरियाे जहाज चार्टर ?
सलह मार्नेलाई टोखा नगरपालिकाले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ दिने
चट्याङ लागेर बारामा ४ जनाकाे मृत्यु
डुबेर २२ वर्षीया युवतीको मृत्यु
भूषण दाहालको नयाँ टिभी शो अब एपिवान टेलिभिजनमा